Pzọ Ntugharị | Martech Zone
Monday, July 30, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Enwere usoro maka itinye usoro inbound ahịa, inwale usoro ahụ, ma melite usoro ahụ. O di nwute, otutu ulo oru anaghi emejuputa atumatu zuru oke tupu hapuru ya ma laghachita na nnukwu ego, obere ahia ahia. Usoro ntanetị dị mma chọrọ usoro na-aga n'ihu iji nye nsonaazụ kacha.
Pathzọ nke na-eduga na ntughari nwere ike ịdịkarị ka ọ na-erughị ahịa. Ma ọ na-ekepụta, ịtụgharị uche na ahụmịhe ma ọ bụ na-eme usoro nyocha na-enwe mmetụta - ịnweta ụzọ ịga nke ọma na-aga nke ọma bụ ihe ịma aka-ruo ugbu a.
Ihe omuma ihe omuma ohuru nke Ion depụtara ụzọ iji gbanwee site na ngosipụta ọhụụ izizi na atụmatụ ntụgharị